2012-01-17 @ 07:53 in Izaho sy ny ahy
Nanomboka tamin'ny herintaona aho no tsy naka resolutions intsony rehefa voalohan'ny taona. Nahomby satria tsara foana ny vokatry ny jery todika tamin'ny faran'ny taona. Toa betsaka kokoa ny zavatra vita satria tSy nisy fetra tsy maintsy notratrarina. HatrAmin'izay mantsy voafetra sy voaterin'ny lisitra maty paika nodinihina sy nandaniana fotoana maharitra kanefa tsy tanteraka akory amin'ny farany. Dia miteraka fanamelohan-tena sy fananjehan'ny eritreritra fotsiny. Nisy koa ny zavatra tsara tokony ho vita fa tsy tafiditra tao anaty liSitra dia tsy naha rototra loatra. Tamin'iny 2011 iny kosa dia maro ny zavatra izay tsy ho natao anatY lisitra mihitsy kanefa natao sy vita satria tonga tampoka tao an-tsaina dia hita hoe mety ho tsara.
Dia izay koa no atao amin'ity taona vaovao ity. Manao izay tratra dia mifaly amin'izay vita.
Mamerina ny firariantsoa.
Androany no taom-baovao :-)
2012-01-14 @ 23:54 in Izaho sy ny ahy
Nanomboka tamin'ny herintaona dia isaky ny 15 janoary ny taombaovaonay :-)
Tratry ny taona daholo dia mirary soa sy fanambinana...
Sary tamin'ny 15 janoary 2011